Dad lagu laayay gobolka Ruushku heysto ee Crimea
By Bukhari Mohamed / in Wararka, Wararka Maanta / on Wednesday, 17 Oct 2018 02:00 PM / 0 Comment / 137 views
Ugu yaraan 17 qof ayaa dhimatay, dad kale oo badanna dhaawac ayaa soo gaaray kaddib markii weerar lagu qaaday goob waxbarasho oo ku taal gobolka Ruushku heysto ee Crimea.
Saraakiisha ammaanka ayaa markii hore sheegay in weerarku uu ahaa qarax hase ahaate waxay hadda xaqiijiyeen in weerarka ka dhacay dugsiga farsamada ee kerch uu ahaa rasaas lagu furay ardaydii ku sugneed dugsiga.
Saraakiisha Ruushka ah ee baaraya falkaan ayaa sheegay in arday da`diisu tahay 18 uu weeraka geystay, isaguna oo markii danbe is dilay.Ardayga weerarka geystay ayaa la aqoonsaday waxaana magaciisa lagu sheegay Vladislav Roslyakov.
Vladislay Roslyakov ayaa rasaas oodda uga qaaday xilli ardaydu ay ku sugnaayeen gudaha dhismaha dugsiga farasamada.
Dhacdada ayaa markii hore waxay saraakiisha Ruusku sheegeen in ay tahay mid argagixiso, hase ahaatee guddigii baarayay ayaa ogaaday in weerarku uusan ahayn mid argagixiso ee uu yahay dil wadareed.
Ciidanka qaranka Ruushka ayaa loo diray si ay u sugaan ammaanka dugsiga tababarka farasamada gacanta oo ay ku jireen arday gaareeysa 850 arday . Sidoo kale waxaa iyana dhankooda gargaarka iyo dabulaadda dhaawaca ka qayb qaadanaya diyaaradaha ciidanka Ruushka.
Crimea ayaa ah gobol ka tirsan dalka Ukraine oo ay degganyihiin dad ku hadla afka Ruushka.Sannadkii 2014ka ayuu Ruushku qabsaday gobolka , iyada wixii intaas ka danbeeyay gobolka la hoos geeyay dalka Ruushka.
Wasiir Beyle oo xarigga ka jaray xarumaha canshuuraha qaar ka mid ah Degmooyiinka G/Banaadir
Muqdisho – Waxaa maanta la daah-furay burburkii dowladdii dhexe... Read more →